- kallachaoromiyaa.org - kallachaoromiyaa.org
Waldhabdee Oromoo gidduu jiru hiikuuf sirni gadaa filannoo isa jalqabaa ta’uu qaba
Sirni Gadaa qabeenya Oromoo ta’uu bira darbee qabeenya addunyaat jedhaan walitti qabaan Gumii Abbootii Gadaa fi Abbaan Gadaa Tuulamaa Goobana Hoolaan. Waldhabduu Oromoo gidduu jiru hiikuuf Sirni Gadaa Filannoo jalqabaa ta’uu qaba jedhan. Oromoon qabeenya ittiin beekamu kanaan fayyadamuu qaba jedhan. Oromoon qaama tokko,qaamni tokko immoo walhindhabu,yoo rakkate waliin rakkata,yoo argates waliin argata jedhan. Akka OBN gabaaseetti,Oromoon waliisaa gidduutti walitti bu’iinsi uumamee mitii Orma waliinuu yoo rakkoon uumame akkataa itti furu waan beekuuf, yoo miiyyuu sirna Gadaa hordofuu qaba jedhan Abbaan Gadaa Tuulamaa kun. Walitti bu’iinsi Obboleeyyan lamaan Ittuu fi Karrayyuu gidduutti uumamee guyyaa kaleessaa akkaataa Sirna Gadaatiin bakka Abbootiin Gadaa Oromoo godinaalee Oromiyaa garaagaraa,qaamooleen nageenya fi aanga’oonni mootummaa argamanitti aanaa Fantaalletti araara argateera. Araarrichi tokko miidhaa tokko miidhamaa ta’ee kan gumaa baasuu fi kan gumaa fudhatu osoo hin taane gama lameeniinuu anis obboleessa koo miidheera jechuun ofitti muranii badii uumameef loowwan gumaa waliif baasanii jiru. Bulchaan godina Shawaa Bahaa Obbo Halaakaa Sinbiroo maanguddoota qabaachuun biyya tokko keessatti nageenya qabaachuudha jedha. Hojii boonsaa hojjetan kanaafiis galateeffatanii, fakkeenyi aanaa Fantaallee kun Oromiyaa guutuu keessatti hojiirra ooluu qaba jedhan. Itti gaafatamaan Biiroo Bulchiinsaa fi Nageenyaa naannoo Oromiyaa Obbo Jibriil Mahaamad guyyaan kun guyyaa aadaa giddu galeessa godhannee rakkoo keenya itti hiikkanne waan ta’eef guyyaa addaati jedhan. Tumsi uummanni Oromoo iddoo adda addaa jiraatan rakkoo Ittuu fi Karrayyuu hiikuuf taasisanis hojii seena qabeessadha jedhan.
Paartichi gaaffii ummata Oromoo bu’uurarraa ni deebisa jedhame
Paartiin Badhaadhinaa Afaan Oromoo Afaan hojii Paartichaafi Mootummaa akka ta’u sagalee guutudhaan murteesse jedhan Ministirri Muummee Itoophiyaa Dr.Abiyyi Ahimad. Paartiin Badhaadhinaa gaaffii Ummanni Oromoo qabu bu’uura irraa kan deebisu akka ta’e Ministirri Muummee Itoophiyaa Dr.Abiyyi Ahmad dubbatan. walitti makamuu Paartilee ADWUI tiin, waa’ee Paartii haaraa hunda’e ilaalchisee, Dr.Abiyyi Ahimad fuula feesbuukii isaanii irratti odeeffannoo kennaniiru. Haaluma kanaan gaaffiin Oromoo ammas kan deebi’e akkuma jiru, fuuldurattis paartiin Badhaadhinaa gaaffii Oromoo deebisuuf xiyyeeffannaa addaatiin hojjeta jedhan Dr.Abiyyi. Keessumaayyuu gaaffii diinagdee ummanni Oromoo qabu deebisuuf, Oromoo fi miseensonni, milkaa’ina Paartii Badhaadhinaaf, tumsa gochuu akka qaban Dr.Abiyyi waamicha dhiheessan. Guyyoota sadiif paartiin isaanii mariirra kan ture yoo ta’u, murtoowwan gurguddoos dabarsee jira jedhan. Bu’uuruma kanaan Afaan Oromoo Afaan hojii Paartichaa fi Mootummaa akka ta’u sagalee guutudhaan murteessee jira. Kanamalees paartii keessattis ta’ee, kan mootummaa keessatti hunduu akkaataa baayyina ummata isaatiin akka hirmaachuu qabus murteessera jedhan. Kun immoo dimokiraasii dhugaa hojiirra oolchuuf gahee guddaa qaba jedhan. Kanaaf gaaffii bara dheeraa ummanni Oromoo qabu tartiibaan deebisuuf hojjetaa kan jirru waan ta’eef, ummanni Oromoo Tokkummaa fi Nageenya isaa eeggachuun nu cinaa dhaabbatee injifannoo amma argame akka ceesisnuuf waamichan dhiheessa jedhan Ministirri Muummee Itiyoophiyaa Dr.Abiyyi Ahimad. Paartiin Badhaadhinaa gama diinagdee qofaan osoo hin taane, kabajaan, bilisummaan akkasumas badhaadhummaa dam-daneessa Itiyoophiyaa keessatti dhugoomsuu akka danda’uuf, humnoonni faffaca’anii jiran walitti sassaabamuudhaan gurmuun dhaabbannee biyya Itiyoophiyaa geggeessuuf murteessuun keenya murtoo guddaa dha." Jedhani..
Ergaa Baga Geessanii Pirezidaantii Bulchiinsa MN Kabajamoo Ob. Shimallis Abdiisaa Ayyaana Fichee Cambalaalaa Ilaalchisuun dabarsan Duraan dursee, ummata guddaa aadaafi duudhaa isaa eeggatee jaarrawwaniif turfachuun har’aan ga’ate, ummata Sidaamaatiin baga guyyaa kabaja ayyaana Fichee Cambalaalaa nagaan geessan, baga waliin geenye jechuun barbaada. Ummanni Sidaamaa sirna lakkoofsa baatiifi jijjiirama baraa ofiisaa danda’e qaba. Sirni kun uumama ummatummaa isaa waliin kan dhalateefi mallattoo ibsituu eenyummaa ummatichaa ta’ee kabajamaa har’arra kan ga’ee dha. Sirni guddaan dhaloota kaleessaatiin kalaqamee kunuunfamaa har’a ga’e kun, mallattoo miidhaginaa ummata Sidaamaa qofa osoo hin taane kaadhimamaa Ambaa Kiliyaa idil-addunyaa ta’uufis ga’eera
Caamsaa 12/ 2012 ) –Qorannaa sa’aa 24 darbe keessa gaggeeffameen, namoota 24 irratti vaayrasiin koroonaa argamuu Ministeerri Fayyaa beeksise. ODP’n yaa’ii ariifachiisaa guyyoota lamaaf Adaamaatti taa’een ajandaawwan Riifoormii Paartichaa fi walitti makamuu Paartii Badhaadhinaa irratti gadi fageenyaan erga mari’atee booda sagalee guutuun mirkaneessee jira
Afaan Oromoo Afaan Hojii Federaalaa dafee akka ta’uuf
Hojii gannaa kanaa keessatti Biiroon Barnoota Oromiyaa
Lagni Awaash guutuun jiraattoonni kumni 32 ol
Warshaan Daabboo Shaggar sa\_'aatitti daabboo kuma 80 oomishuu danda’u
Piroojekttiin Bishaan dhugaatti qarshii Miiliyoona 99’n Ijaaramaa tu
Shawaa kaabaa/salaaleetti Eebba pirpjektootaa
Biqiltuu bara darbe dhaabaman keessaa %84 qabateera
Ijaarsa Masjiida sadarkaa idil addunyaa eegate lafa karee meetira kuma
ODP’n yaa’ii ariifachiisaa guyyoota lamaaf Adaamaatti taa’een
Leenjiin geggeessitoota bu’uuraaf kennamaa ture xumurame
Waltajjiin Marii Nageenyaa Naannolee Bahaa
Kabaja guyyaa saboota, sablammootaafi ummatootaa
Pirojektootni adda adda eebbifamuun tajaajila kennuu
MM raawwii karoora hojii mootummaa bara 2011
Yaa’iin ariifachiisaa Caffee Oromiyaa 3ffaa,
Jijjiiramni eegalame akka hin gufanne
Nageenya eegsisuu keessatti abbootiin amantaa gaheesaanii bahuu qabu
Jilli ABO biyya gale
Magaalaa Bishooftuutti buufanni Xayaaraa ijaaramuufi
Naannoo Oromiyaatti bara bajataa 2011tti dargaggoota mil. 1.1 ta’ani
Ummanni miliyoonni 2fi kumni 200 ol tajaajila bishaan dhugaatii qulqul
Oromia Communication Bureau 2 hrs · INJIFANNICHA DINAGDEENIS DABALUU
Rakkoo bishaan dhugaatitiin dararamaa jirra jedhan jiraattonni Magaal
Oromiyaatti dinagdee haraka 11 oliin guddisuuf karoorfame
OMN dameesaa Finfinneetti banate
Waxabajjii 16 guyyaa jaalalaafi tokkummaa ummatoota Itoophiyaa
Raammoon Geerii Godinaalee Oromiyaa 12 keessatti mul’ate
Sirni federaalizimii akkaataa barbaadamuun hojiitti hiikamuu qaba je
Jilli garee marii Adda Demokraasummaa Oromoo Finfinnee gale
Print | Email | Hits: 6792
J ijjiiramni biyyattii keessatti eegalamee akka hin gufanneefi gaaffileen dhihaatan hundi karaa nagaan akka gaafatamaniif tumsi hundaa akka barbaachisu Mootummaan Naannoo Oromiyaafi Addi Bilisummaa Oromoo dhaaman. Dhaamsi kunis rakkoo nageenyaa tibbana Finfinneefi naannawaasheetti mudate ilaachisuun kan darbedha. Pirezidaantiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa
Kab. Dr. Lammaa Magarsaa walitti bu’insa uumameen miidhaa namaafi qabeenyarra gaheen gadda itti dhaga’ame ibsanii, abbootiin warraa 300 gara qeesaaniitti deebi’uufi warreen hafanis deebi’anii akka dhaabbataniif mootummaan ni hojjeta jedhaniiru. Walitti bu’insa kana keessaas harka qabu kan jedhaman shakkamtoonni 200 oliifi meeshaaleen waraanaas qabamaniiru. Walitti bu’insichi akka babal’atuuf qaamolee nageenya biyyattii hin barbaanneefi saboota walitti buusuuf dhamaa’aniin yaalamus tumsa hawaasaafi humnoota nageenyaan to’atameera jedhaniiru. Garaagarteewwan ilaalchaa karaa ammayyaa’een mariidhaan hiikuun jijjiiramichi akka itti fufu ummanni tumsuu akka qabus Dr. Lammaan dhaamaniiru. Hayyu Dureen Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa gamasaaniitiin jijjiiramni eegalame akka hin gufanne gaaffilee martuu karaa nagaafi seera qabeessa ta’een dhiyaachuu qabu. Jijjiiramni eegalame akka kanaan duraa danqamee akka hin hafne, hunduu gumaachasaa taasisuu qaba jedhaniiru. Garaagarummaa jiru dhiphisuuf miira tasgabbaa’aafi marii bilchina qabuun ta’uu qaba malee qabeenyaa barbadeessuufi lubbuu mancaasuun fala osoo hin taane garaagarummaa kan ballisu akka ta’es himanii, dhaabnisaanii gocha badaafi suukanneessaa akkasii kan balaaleffatu ta’uu ibsaniiru. Kun ta’uu baannaan garuu jijjiiramni aarsaa guddaan argame galma yaadame osoo hin gahiin karaatti hafuun gaaga’ama guddaaf nu saaxiluu danda’a. Ummanni biyyattii hedduunsaa jijjiirama amma mul’achaa jiru kan deggeru waan ta’eef Addi Bilisummaa Oromoofi dhaabbileen siyaasaa hundi waliin tokkummaan hojjechuu akka qabanis hubachisaniiru.
Copyright © 2017. kallachaoromiyaa.org All Rights Reserved. Designed by Endale Takele